Khilaaf ka dhashay doorashadii Djibouti - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Khilaaf ka dhashay doorashadii Djibouti
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Febraayo, 2013, 16:20 GMT 19:20 SGA
Dalka Djibouti waxaa isku dheggan oo is heysta mucaaradka iyo dowladda kadib markii khilaaf uu ka dhashay natiijada doorashadii baarlamaanka ee dhawaan ka dhacday dalka. Dad badan ayaa la xirxiray oo culimo ay ku jiraan.
Doorashada Djibouti oo dhacday Jimcihii ayaa mucaaradku diidan yihiin natiijada
Dad ay ku jiraan saddex sheekh oo caan ka ah dalka Djibouti ayaa la xiray dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay tallaabo ay dowladda Djibouti ku tilmaantay in ay kaga hortagayso qalqalgalinta ammaanka iyo xasiloonida dalka.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Dharaar Hufane Jabuuti oo BBC u warramay ayaa ku eedeeyay dadkan in ay ka mid yihiin mucaaradka oo doonaya in uu qalalaase in ay abuuraan.
Laakiin waxaa dhinaca kale BBC u warramay Ismaaciil Geedi Xareed oo ka mid ah madaxda Isbahaysiga mucaaradka ee USN oo ku tilmaamay hadalka dowladda mid aan waxba ka jirin.
Ismaaciil waxa uu sheegay in aanay ku qanacsaneyn natiijada doorashada isla markaana ay maxkamadda kaga dacwoon doonaan.